China Tungsten Carbide Flat Seal Mhete yeMechanical zvisimbiso Kugadzira uye Fekitori | N & D Carbidhi
* Rokunze dhayamita: 10-800mm
Tungsten carbide inoshandiswa zvakanyanya mumishini yeindasitiri, pfeka zvishandiso zvinodzivirira uye anti-corrosion. Tungsten carbide ndiyo yakanakisa zvinhu zvekudzivirira kupisa uye kutsemuka mune zvese zvakaoma kumeso zvinhu.
Tungsten carbide (TC) inoshandiswa zvakanyanya sechisimbiso kumeso kana zvindori zvine kusagadzikana-kupfeka, yakasimba fractural simba, yakanyanya kupisa kupisa, diki kupisa kuwedzera co-inoshanda. Iyo tungsten carbide chisimbiso-mhete inogona kukamurwa kuita ese ari maviri anotenderera chisimbiso-mhete uye yakamira chisimbiso-mhete.
Iyo miviri yakajairika misiyano ye tungsten carbide chisimbiso kumeso / mhete ndeye cobalt bhainda uye nickel bhainda.
Tungsten carbide zvisimbiso zvinopihwa kudzivirira pumped fluid kuti isabude munzira yekutyaira shaft. Iyo inodzorwa leakage nzira iri pakati pemapadenga maviri maficha ane hukama neiyo inotenderera shaft uye iyo dzimba zvakateedzana. Iyo yekudonha nzira gwanza inosiyana sezvo zviso zviri pasi pekusiyana kwekunze mutoro uyo unowanzo fambisa zviso zvakatarisana.
Tungsten Carbide Flat Seal Ring anoshandiswa zvakanyanya seyechiso kumeso mune mechina zvisimbiso zvemapombi, compressors masanganiswa uye agitator anowanikwa mumafuta ekuchenesa, petrochemical zvirimwa, fetiraiza zvirimwa, mabheriri, migodhi, pulp zvigayo, uye mishonga indasitiri. Iyo chisimbiso-rin'i ichaiswa pane iyo pombi muviri uye inotenderera ekisero, uye inoumba kuburikidza neyekupedzisira kumeso kwetenderedzwa uye yakamira mhete irosi kana gasi chisimbiso.
Pane sarudzo hombe yemhando uye mhando dzeiyo tungsten carbide flat chisimbiso mhete, isu tinogona zvakare kukurudzira, dhizaini, kugadzira, kuburitsa zvigadzirwa zvinoenderana nemifananidzo uye zvinodiwa nevatengi.
TC Mhete Rakaumbwa rezita
Chinyorwa Giredhi ReTungsten Carbide Flat Seal Ring (Chete YeReferensi)
Pashure: Tsika Carbide Bush uye Sleeve
Zvadaro: Tungsten Carbide Kutambanudza Washer yeMapombi
Carbide Valve Seal Rings
Cemented Carbide Seal Mhete
Cemented Carbide Valve Chigaro Mhete
Cemented Carbide Kupfeka Zvikamu
Yakasimba Tungsten Carbide Seal Ring
Flat Mhete YeMechanical Zvisimbiso
Zvokuimba Seal Anopika
Tungsten Carbide Cobalt Bhainda Seal Ring
Tungsten Carbide Nickel bhainda Seal Ring